Kheyre iyo Micheal Keating Oo Diyaarad Helicopter Ku Tagay Saldhigga Ciidanka Uganda Ee Duleedka Baraawe [Sawirro].
Thursday November 16, 2017 - 09:29:45 in Wararka by Super Admin
Wafdi uu hoggaaminayay Ergayga Q.Midoobe uqaabilsan arrimaha Somalia ahna xaakimka dhabta ah ee dalka ayaa shalay gaaray saldhig melleteri oo ciidanka Uganda uga suganyihiin duleedka degmada Baraawe ee Sh/Hoose.
Micheal Keating oo ah Jeneraal Howlgab Ingiriis ah ahna Ergayga Q.Midoobe ee uqaabilsan Howlgalka Soomaaliya iyo Xasan Cali Kheyre R/wasaaraha dowladda Federaalka ayaa diyaarad Helicopter ah ku tagay saldhigga ciidanka AMISOM ee deegaanka Ambareeso.
Socdaalka oo ahaa midkii ugu horrayay ayuu ujeedkiisu ahaa sidii niyadda loogu dhisi lahaa ciidamada Uganda oo muddo ku dhow sedax sanadood wax hareerayn u eg ku wajahaya magaalada Baraawe.
Kheyre iyo Keating waa ku dhiiran waayeen in ay gudaha ugalaan degmada Baraawe waxayna booqashadooda diiradda ku saarayeen Saldhigga Amabareeso.
Duqeyn xooggan oo loo adeegsaday Hoobiyaal ayaa lagu qaaday garoonka macmalka Baraawe xilligii ay mas’uuliyiintu ka degayeen, Michel Keating iyo Kheyre indhahooda ayay ku arkeen in kumanaanka askari ee ciidanka Uganda katirsan ay ka badin la’yihiin isdifaacid ayna soo ooteen dhul 5 KM ku dhow.
Weerarada dhabagalka ah ee xoogaga Al Shabaab ay udhigaan ciidanka Uganda marka ay sahayda ugelbinayaan degmada Baraawe ayaa cuuryaamisay shaqada ciidamadaas loo igmaday oo aheyd in ay baacsadaan xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Dowladda Uganda ayaa dhowaan sheegtay in cutubyada ugu horreeya ee ciidankeeda ay Soomaaliya kala bixi doonto bisha December ee soo socota.